DEG DEG: Marcelo Oo Dib Loogu Yeeray , Si Uu U Buuxiyo Booska Xulka Ee
Daafac kooxda Real Madrid Marcelo ayaa lagu soodaray xulka Brazil ee kulamada September kadib markii uu dhaawacmay daafac kooxda Atletico Filipe Luis.
Marcelo ayaa markii hore laga waayay safka uu Dunga usoo xushay inuu kala hortago xulalaka Costa Rica and USA, balse waxaa lawaayay daafac ka ciyaara dambeedka bidix ka dib markii la sheegay inuu dhaawacmay Flip Luis, ayaa loo baahday Marcelo.
Isbedelo badan ayaa lagu arki doonaa xulkii uu soo xushay Dung sababtoo ah waxaa dhaawacmaya xidigo qaar ee uu soo xushay Dunga.
Ka hor Marcelo Fabinho ayaa lagu buuxiyey booska daafaca midig ee xulkaasi Dani ALves kadib markii uu dhaawacmay kulankii koowaad ee horyaalka kooxdiisa.
Sidoo kale Oscar iyo Ramires ayaa la sheegay inay dhaawacanyihiin waxaana lagu buuxiyey boosaskooda Rafinha and Philippe Coutinho.
Xulka shanta jeer ku guuleeystay koobka aduunka ayaa bisha soo socta la ciyaari doona xulalka Costa Rica iyo USA.